एमालेको निर्वाचन केन्द्रीत तयारी
नारायणगढ, २५ चैत । स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको पकड बलियो बनाउनको लागि नेकपा एमाले चितवनले सक्रियता बढाएको छ ।
पार्टीले ल्याएको जनमुखी कार्यक्रमलाई जनताले मन पराएकाले आगामी निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि योजनावद्ध रुपमा लागेको एमाले चितवनले जनाएको छ । यसैक्रममा पार्टीको बिहीबार कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले अझ बलियो बनाएर लैजानको लागि मद्दत पुगेको पार्टी उपाध्यक्ष तेजेन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण कमिटी लाग्नको लागि योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढेको हो । सचिवालय बैठकले समेत पार्टीको नीति विपरीत गतिविधि देखाएका, विपक्षी पार्टीका गतिविधीमा सक्रिय भएका, आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई सहयोग नगरेका, बागी उम्मेदवारी हालेकालाई कारबाही गरी आगामी दिनमा कुनै पनि जिम्मेवारी नदिने गरी अगाडि बढेको छ ।
जिल्ला अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नको लागि जनतामाझ लोकप्रिय, राम्रो छवि भएको, मतदातालाई आकर्षित गर्नसक्ने व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन गरेको छ ।
बैठकले स्थानीय तहका उम्मेदवार भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखिने र सार्वजनिक प्रतिष्ठामा आँच आउने कुनै काममा संलग्न नभएको, असल आचरणयुक्त हुनुपर्ने, स्थानीय विकास सम्बन्धी विषयवस्तुमा राम्रो रुचि, सही दृष्टिकोण, ज्ञान र क्षमता भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ ।
पार्टीको बैठकले उम्मेदवार छनौटका लागि विधि निर्धारण गरेको छ । चैत ३० गतेसम्म पार्टीका सबै वडा कमिटीले सम्भावित वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरुको नाम प्रत्येक पदका लागि सकभर सर्वसम्मत र त्यसो नभएमा बढीमा ३÷३ जनाका दरले नगर वा गाउँ कमिटी समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
बैशाख ४ गते गाउँ वा नगर कमिटीले जिल्ला कमिटी समक्ष र जिल्ला कमिटीले बैशाख ७ गते प्रदेश कमिटी समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ । गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका÷महानगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख पदको उम्मेदवारको सुझाव र सिफारिस गर्दा दुबै पदमा न्यूनतम एक जना महिलाको नाम समावेश गर्नु पर्नेछ ।
प्रत्येक वडाले सदस्य पदको लागि सुझाव पेश गर्दा न्यूनतम एक जना दलित महिलासहित दुई जना महिलाको नाम पठाउनु पर्नेछ ।
पार्टी निर्णयलाई अवज्ञा गर्ने, पार्टीले अघि सारेका उम्मेदवारको विरुद्धमा बागी उम्मेदवार बन्ने, बागी उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक बन्ने, विरोधी दलका उम्मेदवारसँग साँठगाँठ गर्ने, विरोधी दलको उम्मेदवारको समर्थक वा प्रस्तावक बन्ने व्यक्तिलाई उम्मेदवारीका सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने पार्टी कमिटीले तत्काल पार्टी सदस्यताबाट निष्काशित गर्नेछ ।
यसरी कारबाहीमा परेका व्यक्तिको पक्षपोषण गर्नेहरुलाई समेत अनुशासनात्मक कारबाही गर्नेछ । निष्काशनको कारबाहीमा परेको व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म पुनः पार्टी सदस्यता प्रदान गरिने छैन । राज्य वा पार्टीका कुनै पनि पद र सुविधा नदिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
पार्टी पोलिटव्युरो सदस्य एवं प्रदेश नं. ३ का सहसंयोजक काशीनाथ अधिकारी प्रमुख अतिथि रहेको उक्त बैठकले समिति तथा उपसमितिहरु गठन गरेको छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज कृष्ण खनालको संयोजकत्वमा ५ सय १ सदस्यीय जिल्ला निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ ।
जिल्ला उपाध्यक्ष तेजेन्द्रबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा दुई हजार १ सदस्यीय जिल्ला निर्वाचन प्रचार प्रसार उप–समिति, प्रकाश ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा स्वयंसेवक तथा सुरक्षा समन्वय उप–समिति गठन भएको छ ।
बैठकमा बोल्दै पोलिटव्यूरो सदस्य काशीनाथ अधिकारीले अहिले एमालेप्रति जनताको चाहना बृहद रुपमा आगाडि बढेर आएको बताए । एमाले पार्टीले देश विकासमा केही गर्दछ भन्दै उसैलाई बहुमत दिनु पर्छ भन्ने चाहना जनतामा रहेको उनले बताए ।
व्रतबन्धमा संकलित रकम अक्षयकोषमा
भरतपुर, २५ चैत । भरतपुर ८ गौरीगञ्जका लक्ष्मीकान्त पौडेलको बिहीबार भएको व्रतबन्धमा संकलन भएको ९० हजार रुपैयाँ अक्षयकोषमा राखिएको छ ।
पौडेलकी हजुरआमा स्व. गंगा पौडेलको नाममा श्री माध्यमिक विद्यालय गौरीगञ्जमा स्थापना गरिएको अक्षयकोषमा उक्त रकम थप गरी अक्षयकोषको राशि एक लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । संकलित रकम बिहीबार एक कार्यक्रमबीच विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णु बास्तोला र प्रधानाध्यापक हुतराज उपाध्यायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
सहकारीलाई अंकुुश लगाउने ऐन बन्दैन ः थानी
रत्ननगर, २४ चैत । सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हृदयराम थानीले कुनै पनि हालतमा सहकारीलाई अंकुुश लगाउने गरी ऐन बन्न नदिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सौराहामा आयोजना गरेको ‘सहकारी क्षेत्रको २० वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तर्जुमा’ विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले हाल सहकारी ऐन निर्माणको काम चलिरहेको र सहकारीलाई अंकुश लगाउने प्रयास भइरहेको बताए । आफूले कुनै पनि हालतमा यस्तो हुन नदिने र जबरजस्ती ऐन ल्याउन खोजिए त्यसमा हास्ताक्षर नगर्ने मन्त्री थानीले बताए ।
उनले अरुको हालीमुहाली चल्ने ऐन निर्माण कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने प्रस्ट पारे । किसानहरुले बाख्रा बेचेर, हलो जोतेर जम्मा गरेको रकममा ठुलाबडाले हैकम चलाउनु गलत भएको उनको भनाइ थियो । सहकारीमा देखिएको विकृति र कालो धन प्रवेशमा रोक लगाउन सहकारीकर्मीले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे ।
गरिबी मन्त्रालय अनुसारको जिम्मेवारी नपाएका कारण आफूले गरिबी न्यूनीकरणका लागि ठोस र प्रभावकारी काम गर्न नपाएको उनले बताए । उनले भने, ‘गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्रीले चलाउने, युवा स्वरोजगार कोष अर्थमन्त्रीले चलाउने, गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम सघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चलाउने भए यो मन्त्रालयको आवश्यकता छैन ।’
फोनिजको परिचयात्मक कार्यक्रम
भरतपुर, २५ चैत । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) चितवन शाखाले बिहीबार परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
फोनिज चितवनमा नयाँ नेतृत्व आएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन र पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संगठनहरूसँगको सम्बन्ध सुमधुर होस् भन्ने उद्धेश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले सम्बन्धित विषयका लागि पत्रकार आफैँ विज्ञ हुनुपर्ने बताए ।
फोनिज चितवनका अध्यक्ष सन्दीपकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, प्रेस सेन्टर नेपालका कोषाध्यक्ष सुरेशचन्द्र अधिकारी, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनका कोषाध्यक्ष नवराज ढकाल, प्रेस चौतारी चितवनका अध्यक्ष तीर्थ नेपाल, प्रेस सेन्टर चितवनका अध्यक्ष प्रकाशमणि ज्ञवाली, पत्रकार महासंघ चितवन शाखाका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण गिरी, फोनिज चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तकुमार चौधरी लगायतले बोलेका थिए ।
पार्टी बलियो भए निर्वाचनमा जित ः थापा
नारायणगढ, २४ चैत । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा संगठन विभाग प्रमुख रामबहादुर थापाले पार्टी बलियो भए निर्वाचनमा जित निश्चित रहेको दाबी गरे ।
पार्टीको युवा संगठन वाईसीएल चितवनको एकता भेलालाई बुधबार भरतपुरमा सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीलाई मजबुद पारी एक भएर चुनावमा लाग्न समेत कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए । ‘चुनाव जित्न कम्युनिष्ट सिद्धान्तमा ध्यान दिनुपर्छ’ नेता थापाले भने, ‘वैचारिक संघर्ष र साँस्कृतिक क्रान्तिबिना राजनीतिक र आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिंदैन ।’
बदलिंदो परिस्थिति अनुसार विचार र दर्शनको पनि विकास गर्दै लैजानुपर्नेमा नेता थापाको जोड थियो । उनले १० वर्षे जनयुद्धपछि जनताका केही उपलब्धीहरु रक्षा भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको भन्दै यसतर्फ गम्भीर हुन कार्यकर्तालाई आग्रह गरे । यसको महत्वपूर्ण उपलब्धीमध्ये निर्वाचन पनि एक भएको उनको भनाई थियो । व्यक्तिवादले पार्टीमा फुट जन्माउने भन्दै त्यस्तो सोचलाई परास्त नगर्दासम्म एकता कायम नहुने नेता थापाको जिकिर थियो ।
माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कार्यालय सदस्य विश्वभक्त दुलालले हालसम्मको उपलब्धीलाई रक्षा गर्नु र अहिलेको चुनावको मत परिणामलाई आफूतिर पार्नु माओवादी कार्यकर्ताको ठुलो जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे । पर्टी एकतामा जोड दिंदै उनले पार्टीले तोकेका नेतालाई खुलेर सहयोग गर्न समेत कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
माओवादी केन्द्रका अर्का नेता नारायण दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन जितहारसँग मात्रै नभई वर्ग संघर्षसँग पनि जोडिएको बताए । उनले चुनावी गतिविधिलाई तीब्र रुपमा अघि बढाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।
डा. पौडेलको सरूवा रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
चितवन, २५ चैत । भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. विजयप्रसाद पौडेलको सरुवा रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
डा. पौडेलको सरूवा नियमसंगत नभएको भन्दै सर्वोच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । अस्पतालको मेडिकल विभाग प्रमुख समेत रहेका ११ औं तहका वरिष्ठ चिकित्सक पौडेललाई मन्त्रालयले दाङ सरुवा गरेको थियो । ५५ वर्षभन्दा माथिका कर्मचारीलाई उनीहरूको पूर्वस्वीकृति नलिई सरूवा गर्न नपाइने र मन्त्रालयले असोज महिनामा मात्रै चिकित्सकहरूको सरूवा गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले डा. पौडेलसंगै डा. सुनिलमणि पोखरेल र डा. कालिदास अधिकारीको सरूवा गरेका थिए । सरुवाको विरोध गर्दै त्यसको खारेजीका लागि चैत ३ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका डा. पौडेलका पक्षमा चैत ११ गते गरिएको सरुवा तत्काल रोक्न मन्त्रालयको नाममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सरुवा रोक्न सर्वोच्चले दिएको आदेशको पत्र आफूले प्राप्त गरेको अस्पतालका मेसु रुद्र मरासिनीले बताए । डा. पौडेलले मन्त्रालयले आस्थाका आधारमा र विचार राखेकै भरमा सरूवाको ‘दण्ड’ चलाइएको भन्दै त्यसको प्रतिरोध गर्दै आएका छन् ।
रामजानकी आश्रममा गाभियो गार्गी गुरुकुल
देवघाट, २४ चैत । पवित्र तीर्थस्थल देवघाटस्थित रामजानकी बालिका आश्रममा १६ जना बालिका थपिएका छन् । काठमाडौंको गार्गी कन्या गुरुकुल प्रतिष्ठानमा रहेका बालिकालाई देवघाट ल्याइएको हो ।
वरिष्ठ समाजसेवी एवं विदुषी अंगुरबाबा जोशीले २०६८ सालमा स्थापना गरेको गार्गी गुरुकुल काठमाडौंको मालीगाउँमा रहेको थियो । उक्त गुरुकुल र रामजानकी आश्रमको उद्देश्य एउटै भएकाले बालिकालाई संस्थागत रुपमा देवघाट ल्याइएको गार्गी कन्या गुरुकुल प्रतिष्ठानको संचालक समितिकी कोषाध्यक्ष निर्मला पोखरेलले बताइन् ।
बालिकाहरुलाई देवघाट ल्याइएसंगै गार्गी गुरुकुल संस्थागत रुपमा सम्पूर्ण आर्थिक तथा भौतिक सामग्री रामजानकी आश्रमलाई हस्तान्तरण गरिएको गार्गी गुरुकुलकी उपाध्यक्ष डाक्टर मन काफ्लेले बताइन् । आश्रम एकीकृतपछि गुरुकुलको नाम रामजानकी गार्गी कन्या गुरुकुल रहने लोककल्याण सेवा प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष सावित्री टण्डनले बताइन् ।
आश्रममा ४४ जना बालिका रहेका छन् । भवन निर्माण समितिका संंयोजक शान्तप्रसाद पोखरेलले मापदण्ड अनुसार आश्रम संचालनार्थ भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु गरिएको जानकारी दिए । यसैबीच, आश्रमको निर्माणाधीन भवन सहयोगार्थ कालिकाप्रसाद रिमाल र फणिन्द्रनाथ न्यौपानेमार्फत फ्रान्सेली नागरिकले ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
किसानको पसिनामाथि खनियो असिना
चितवन, २४ चैत । नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ३५ लाख ऋण लगेर तरकारी खेती सुरु गरेका पश्चिम चितवन भीमनगरका कृष्णप्रसाद न्यौपाने यतिखेर चिन्तित छन् । न्यौपानेको दैनिकी तरकारी बेच्नुभन्दा पनि असिनाले नष्ट गरिदिएको तरकारी स्याहार्नमै बित्न थालेको छ ।
‘तीन बिघामा करेला, साढे दुई बिघामा लौका, दुई बिघामा टमाटर र अर्को दुई बिघामा भेण्टा लगाएको थिएँ । चैत सात गते आएको असिनाले अलिअलि नष्ट ग¥यो । त्यसपछि १९, २० र २१ गते आएको लगातारको असिनापानीले सखाप पा¥यो’ उनले भने, ‘अहिले असिनाले झारेका तरकारी स्याहार्दा नै दिन बित्छ ।’
२०६० सालमा १० कठ्ठामा तरकारी खेती सुरु गरेका न्यौपानेले अहिले १७ बिघामा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । यतिखेर उनले करेला, काँक्रो, बोडी, टमाटर, भेण्टा लगायतका नगदे बाली लगाएका थिए । ‘५० प्रतिशत नोक्सान भएको छ’ उनले भने, ‘नौ बिघामा ४० लाखको लगानी भएको छ । १० देखि १५ लाख रुपैयाँ उठ्ला भन्ने सोचेको छु ।’
वार्षिक १० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्यका साथ तरकारी खेती गरेका न्यौपानेको सपना असिनाले चकनाचुर पारेको छ । गत वर्ष बाली बिमा गराउँदा कागजी झन्झट भएको भन्दै उनले यसपटक बाली बिमा पनि गराएनन् । पोहोर साल क्षतिपुर्तीको दुई लाख रुपैयाँ लिन दुई महिना धाउनु परेको उनले बताए ।
अर्घाखाँचीका गणेशप्रसाद भुषाल तरकारी खेतीका लागि २०६० सालमा चितवन झरे । पाँच कठ्ठाबाट तरकारी खेती सुरु गरेका भुषालले अहिले १० बिघामा तरकारी खेती गरेका छन् । सधैँजसो बैशाखमा आउने असिना अहिले चैतमै आएका कारण उत्पादन लिन नपाउँदै नष्ट भएको उनी बताउँछन् । मैले काँक्रा, भेण्टा, करेला र टमाटर लगाएको छु’ उनले भने, ‘सबैजसो तरकारी नष्ट भएको छ ।’ पछिल्लो समय लगातार तिन दिन सम्म परेको असिना पानिले पश्चिम चितवनमा तरकारी बालीलाई नष्ट गरिदिएको छ । जसका कारण अहिले किसानहरु समस्यामा परेका छन् ।
चितवनको पश्चिमी क्षेत्र तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र हो । चितवनमा एक हजार आठ सय हेक्टरमा तरकारी खेती हुन्छ । पश्चिममा एक हजार दुई सय हेक्टरमा तरकारी खेती हुन्छ । यहाँ एक जनाले २८ बिघासम्म जमिनमा तरकारी लगाएका छन् । ३० जनाभन्दा बढी किसानले व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गरिरहेका छन् ।
बुधबार दिउँसो बारीमा असिनाले नष्ट गरेको तरकारी केलाउँदै गर्दा भेटिएका अमृतनगरका मनोज सुवेदी यसपालिको असिनाले १५ देखि २० लाखसम्म क्षति पु¥याएको बताउँछन् । ‘तरकारी पाँच बिघामा छ । टमाटर, बोडी, काँक्रो, भेडेखुर्सानी, मुला र बन्दा लगाएको थिएँ’ उनले भने, ‘असिनाले सबैजसो तरकारी नष्ट गरिदियो ।’
सरकारले किसानलाई कृषि बिमामा आकर्षित गर्नको लागि विभिन्न योजना ल्याएको छ । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा कृषकले गरेको कृषि बिमाको शुल्कको ५० प्रतिशत राज्यले ब्यहोर्ने व्यवस्था थियो । यो शुल्कमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर समेत जोड्ने गरिन्थ्यो । चितवनमा केरा खेतीमा बिमा गर्न कृषक आकर्षित भएपनि माछा तथा तरकारी खेतीमा भने त्यति आकर्षित भएको पाइँदैन ।
‘गत वर्ष मैले ६ बिघामा लगाएको तरकारी बाली बिमा गरेको थिएँ । त्यतिखेर मेरो सबै तरकारी असिनाले नष्ट गरिदियो । २७ लाख मैले बिमा वापत पाउनुपर्ने थियो । १३ लाखमात्र पाएँ’ भीमनगरमा तरकारी खेती गर्दै आएका खुमानन्द अर्यालले भने, ‘पूर्ण क्षति भएपछि लगानीको ९० प्रतिशत पाउनुपर्छ तर सरकारी कर्मचारी र बिमा कम्पनी मिलेर त्यो दिँदैनन् । त्यसले गर्दा अहिले बिमा गरेको छैन ।’
झरी, हावा, हुरी, खडेरी, असिनाले बाली नष्ट गरिदिँदा किसानहरुले बिमा वापत राहत पाउने गर्दछन् । तर चितवन जिल्लामा तरकारी खेती गर्ने अधिकांश किसानले बाली बिमा गराएका छैनन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय चितवनले असिनाले पारेको क्षतिको विवरण संकलन गरेर राहतका लागि कृषि विभागमा पठाइने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा लायन्स
भरतपुर, २४ चैत । लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ३२५ बी २ नेपालको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन चैत २६ गते शनिबार नवलपरासीको गैँडाकोटमा आयोजना हुने भएको छ ।
चितवनको भरतपुरमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी लायन्स महाधिवेशनबारे जानकारी दिइएको हो । लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ३२५ बी २ नेपालका गभर्नर घनश्याम भट्टराईले महाधिवेशनको तयारीका लागि २२ वटा समिति बनाई काम भइरहेको र तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । महाधिवेशनमा डिस्ट्रिक्ट ३२५ बी २ अन्तर्गतका तीन सय पाँच वटा लायन्स क्लबका दुई हजार पाँच सय प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो लायन्स डिस्ट्रिक्ट ३२५ बी २ अन्तर्गतका लायन्स क्लबमा कूल आठ हजार एक सय सदस्य छन् । यस डिस्ट्रिक्टको कार्यक्षेत्र काठमाडौँसहित पूर्वको बीरगञ्जदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म रहेको छ । पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले वर्ष २०१७ जुलाई एकदेखि २०१८ जुन ३० सम्मका लागि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, प्रथम भाइस गभर्नर र द्वितीय भाइस गभर्नर चयन गर्नेछ । ती पदहरुमा एकएक जनाको उम्मेदवारी परेपनि उनीहरुले महाधिवेशनबाट कम्तीमा ५१ प्रतिशत यस भोट (विश्वासको मत) प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको गभर्नर भट्टराईले जानकारी गराए ।
गभर्नर भट्टराईले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल जुन ३० मा सकिने जानकारी दिँदै आफूले लायन्स ब्लड बैंक स्थापनाको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन् । गभर्नर भट्टराईका अनुसार, लायन्स ब्लड बैंक १८ करोडको लागतमा किर्तीपुरमा आगामी एक वर्षभित्र निर्माण गरिनेछ । ‘तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा गरिसकेका छौँ’ लायन्स ब्लड बैंकबारे जानकारी दिँदै गभर्नर भट्टराईले भने, ‘लायन्स क्लब इन्टरनेशनलले १५ करोड रुपैयाँ बराबरको आवश्यक उपकरण सहयोग गर्ने भएको छ ।’ उनले किर्तीपुरमा लायन्सको केन्द्रीय ब्लड बैंक स्थापना भएपछि आगामी वर्ष पहिलो शाखा चितवनमा स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी गराए ।
पत्रकार सम्मेलन लायन्स डिस्ट्रिक्ट ३२५ बी २ का कन्भेनर चिजकुमार मास्केको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । लायन्स महाधिवेशनमा लायन्स अन्तर्राष्ट्रियका निर्देशकद्वय सञ्जय खेतान र अरुणा अभय ओस्वाल अतिथिका रुपमा सहभागी हुने मास्केले जानकारी दिए । महाधिवेशन उद्घाटनअघि चितवनको भरतपुरदेखि नवलपरासीको गैँडाकोटसम्म शोभायात्रा गरिने आयोजक संस्थाले जनाएको छ ।